DFP : « Ilaina ary tsy azo avela ny fiaraha-mitantana » · Aponga
DFP : « Ilaina ary tsy azo avela ny fiaraha-mitantana »
Inona ny vahaolana amin’izao toe-draharaham-pirenena tsy hita be ihany izao Ilaina ary tsy azo avela ny fiaraha-mitantana, raha ny fijerin’ny DFP.
« Tsy azo avela hitohy ela intsony izao fahapotehan’ny firenena izao. Ilaina ary tsy azo ialana ny fiaraha-mitantana », hoy ny mpandrindra ny Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP), Ratolojanahary Maharavo, teny Ambohipo, omaly, momba ny fivoriana iantsoan’ny DFP ireo hery velona ho amin’ny fanovana.
Mialoha izay fiaraha-mitantana izay, mila mifanaraka tsara amin’izay asa sy fomba ratsy tsy azo averina intsony eto amin’ny firenena amin’ny fitantanam-panjakana ny rehetra, araka ny fanazavany. Misy ny soatoavina iraisam-pirenena amin’ny tany repoblikanina, izay tsy raharahain’ny mpitondra amin’izao fotoana izao.
Hivory eny Andrainarivo, anio, àry ireo hery velona ho amin’ny fanovana, handinika sy hamaritra izay asa sy fomba ratsy tsy azo averina intsony eto amin’ny firenena. Misy avy amin’ny sendikà izy ireo, antoko politika, firaisamonina sivily, fikambanana… Hiaraha-manaiky sy mamakafaka izay fomba sy fanao tsy azo averina intsony amin’ny fitantanam-pirenena, raha mbola tiana ho Repoblika i Madagasikara.
Tsy maintsy hirosoana ny fiaraha-mitantana
Aorian’izay, hifanarahana ireo foto-kevi-dehibe hitondrana ny fiaraha-mitantana. « Tsy afa-kitanisa fotsiny isika hoe tsy ekena intsony ny fitantanan’ny filohan’ny Repoblika sy ny HVM samy irery ny firenena, fa hoe: inona no hifanarahan’ny hery ho amin’ny fanovana amin’izay asa sy fomba ratsy tsy azo averina intsony » hoy izy.
Antsoiny ny hery politika sy hery ho amin’ny fanovana rehetra ho tonga amin’ny fivoriana, fa efa misy ny volavolan-tsori-dalana haroson’ny mpikarakara.
Heverin’ny DFP fa dingana tsy maintsy hirosoana ho amin’ny fanavotam-pirenena ny fiaraha-mitantana, ny fanovana lalàmpanorenana, ny fanadiovana ny tontolon’ny fifidianana, fampihavanam-pirenena.
Tunnel Ambohijatovo : rumeur d’effondrement